Vaovao - Fitaovam-pitaovana solika sy entona
Ny indostrian'ny solika sy ny entona no fototry ny fiaraha-monina maoderina. Ny vokatra ao aminy dia manome angovo ho an'ny mpamokatra herinaratra, manafana trano, ary manome solika ho an'ny fiara sy fiaramanidina hitondrana entana sy olona eran-tany. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitrandrahana, fanadiovana ary fitaterana ireo ranon-javatra sy entona ireo dia tsy maintsy mijoro amin'ny tontolo miasa mafy.
Tontolo iainana sarotra, fitaovana kalitao
Ny indostrian'ny solika sy ny entona dia mampiasa fitaovana manokana mba hidirana amin'ny harena voajanahary sy hitondrana azy ireo eny an-tsena. Avy amin'ny fitrandrahana ambony mankany amin'ny fizarana afovoany sy ny fanadiovana midina, maro ny asa mitaky fitahirizana sy fivezivezena ny haino aman-jery eo ambanin'ny tsindry sy amin'ny maripana mahery vaika. Ny zavatra simika ampiasaina amin'ireo dingana ireo dia mety ho manimba, manimba, ary mampidi-doza amin'ny fikasihana.
Ny orinasan-tsolika sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny famatsiana dia afaka mahazo tombony amin'ny fampidirana ireo fitaovana sy adaptatera vy tsy misy kilema amin'ny fizotrany. Mafy, mahatohitra harafesina ary madio io fianakaviana io. Ny toetran'ny fampisehoana marina dia miovaova arakaraka ny kilasy, fa ny toetra ankapobeny dia:
• Nonmagnetic, amin'ny naoty manokana
Ny vy tsy misy vy dia manana votoaty chromium avo lenta, izay mamokatra sarimihetsika oksida tsy hita maso sy manasitrana ny tenany amin'ny lafiny ivelany. Ny tany tsy misy porous dia manakana ny fidiran'ny hamandoana, mampihena ny harafesina amin'ny tselika, ary ny lavaka.
Hainar Hydraulics dia manamboatra fitaovana sy adaptatera vy mahazatra sy mahazatra ho an'ny fampiharana solika sy entona. Avy amin'ny fiarovana amin'ny harafesina ka hatramin'ny fanerena mafy dia manana vokatra fanaraha-maso rano izahay mba hanomezana izay ilainao.
• Hose Barb Fittings, na PushOn Fittings
Ny fitrandrahana sy fanatsarana ny harena voajanahary dia matetika mitranga any amin'ny faritra lavitra, saro-pady amin'ny tontolo iainana, izay midika fa ny fikojakojana no zava-dehibe indrindra. Ny fittings & valves misy solika sy gazy dia mifehy ny ranon-javatra sy ny entona.
Ny vokatray dia mety amin'ny fampiharana fanodinana solika sy entona rehetra. Anisan'izany ny:
• Fandefasana ranon-javatra
Tsy mitovy ny fizotran'ny solika sy ny entona roa. Vokatr'izany dia tsy mety amin'ny fampiharana iray ny fitaovana sy adaptatera vokarina faobe. Mahazoa vahaolana manokana ho an'ny toe-javatra mifehy ny ranonao miaraka amin'ny fanampian'ny Hainar Hydraulics.
Hainar Hydraulics dia afaka manamboatra vokatra manokana mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Ny sampan-draharahan'ny fanamboaran-trano an-tranonay dia ahitana mpiasan'ny veterana afaka manatanteraka ireto dingana manaraka ireto:
Azontsika atao ny manapaka ny fifandraisana misy kofehy. Misy ny fitsirihana vaky hose eny an-toerana hatramin'ny 24,000 kilao isaky ny santimetatra toradroa. Ampiasaina izy io mba hanamafisana ny tsy fisian'ny lalana mitete ary ny fitaovana dia afaka mitazona tsindry tiana.
Ny fitaovana solika sy entona dia tsy maintsy tsara mandritra ny fandidiana satria ny olana rehetra dia avo lenta. Ao amin'ny Hainar Hydraulics dia mandray tsara ny kalitao izahay. Ny entana rehetra amboarinay dia mahafeno ny fenitra ISO 9001: 2015 ho an'ny fametrahana, famokarana ary serivisy. Ny laharan'ny ampahany, ny laharan'ny andiany, ny laharan'ny andiany, ny kaody fitaka, ary ny karazana traceability hafa rehetra dia azo asiana laser amin'ny vokatra.
Ny fitaovana dia azo avy amin'ny mpamatsy azo itokisana, ary ny fanarahan-dalàna dia voamarina rehefa tonga. Ny mpiasan'ny fanaraha-maso ny kalitao dia mampiasa fitaovana fitiliana sy fitsirihana marina mba hanamarinana ny vokatra rehetra mihoatra ny fenitry ny indostria na ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny baiko rehetra dia nozahana ho marina alohan'ny fandefasana.
Raha ny tena ifantohanay dia fitaovana hydraulic vy vita amin'ny vy ho an'ny indostrian'ny solika sy entona, dia afaka manamboatra sy mandefa saika fitaovana fanaraha-maso ny rano izahay. Ny fanisana vy tsy misy vy be dia be dia manome antoka fa manana ny ampahany ilainao ao anaty tahiry izahay ary vonona halefa. Ny baiko rehetra voaray alohan'ny 3 ora tolakandro dia alefa amin'io andro io ihany.